Ndị China na -emepụta aluminom mkpuchi usoro na -emepụta ya na ndị na -eweta ya Chenyu
Ọ na -agbaji n'echiche ihe atụ ọdịnala wee mepee oghere echiche na -adịghị agwụ agwụ maka ezinụlọ ejiji siri ike. Ọ bụ n'ezie ụdị eji achọ mma nke bara uru ma maa mma.
1. E jiri ya tụnyere akwa seramiiki, iko na ihe ndị ọzọ, ihe mkpuchi aluminom nwere ịdị arọ, ike dị elu, rigidity dị mma na nhazi dị mfe.
2. Mkpuchi elu N'ihi mkpuchi PVDF, ọ nwere ezigbo nguzogide ihu igwe na nkwụsị UV, agba na gloss na -adịte aka, ezigbo corrosion, enwere ike iji ya n'okpuru ọnọdụ siri ike nke -50 ° C -80 ° C.
3. Ezi acid na nguzogide alkali .PVDF mkpuchi ọkachasị Akzo Novel bụ ugbu a ihe mkpuchi kachasị mma maka iji ya eme ihe n'èzí.
4. Ọmarịcha nhazi arụmọrụ, dị mfe ịkpụ, ịgbado ọkụ, gbagọrọ agbagọ, nwere ike ịkpụzi ma dịkwa mfe ịwụnye na saịtị.
5. Mkpuchi ụda na arụmọrụ ịmịkọrọ ude dị mma, enwere ike ịpịa ya n'ụzọ ọ bụla na mkpuchi aluminom. A pụrụ ịgbakwunye owu na-eme ụda, ajị nkume na ihe ndị ọzọ na-ada ụda na ihe na-egbochi okpomọkụ na azụ, nke nwere ezigbo nkwụghachi ọkụ na enweghị anwụrụ ọkụ na-ere ọkụ.
6. Enwere ike ịhọrọ ụcha ka obosara na agba mara mma.
7. Ọ dị mfe ihicha ma lekọta ya, wee zute ihe ndị achọrọ maka nchekwa gburugburu ebe obibi.
Akụkụ nke aluminom panel
(1) Ihe mkpuchi aluminom bụ nke usoro 1100 ma ọ bụ mbadamba 3003 nke alloy alloy, nke a na -edozi ya site na -ehulata, ịgbado ọkụ, ọgịrịga na -eme ka ọ dị ike.
(2) Mkpuchi elu: A na -eji mkpuchi PVDF mee ihe maka itinye ihe n'èzí, na imecha igwe ma ọ bụ mkpuchi ntụ ntụ bụ maka ịchọ ụlọ mma.
(3) Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi aluminom dị n'èzí bụ 2.0mm, 2.5mm ma ọ bụ 3mm; maka ihe ndozi n'ime ụlọ ma ọ bụ n'uko, ihe mkpuchi aluminom dị gịrịgịrị 1.0mm ma ọ bụ 1.5mm dị mma.
Osote: Pearlescent Aluminom Plastic Panel